Naya Post Nepal | काठमाडौमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको चर्चा धेरै, २०७४ मा कति भोट ?
काठमाडौमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको चर्चा धेरै, २०७४ मा कति भोट ?
काठमाडौं । काठमाडौ महानगरपालिकामा मेयर पदका लागि ३५ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएका छन । सो मध्ये बालेन्द्र शाह(बालेन)को चर्चा यतिखेर धेरै देखिएको छ । समाजाकि सञ्जालमा अध्याधिक छाएका बालेनले काठमाडौंको मतदा ताबाट मतपेटिकमा कति मत कति झार्न सक्छ त्यो ३० गते हुने मतदानले देखाउला ।
पेसाले स्ट्रक्चरल ईन्जिनियर बालेनले महानगरको विकासलागि शिक्ष, स्वास्थ्य, पूूर्वाधार, यातायात, पानी, महिला, फोहरव्य स्थापन लगायत २८ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।
काठमाडौंको परम्परागत सौन्दर्य झल्काउने भन्दै आएको वालेनलाई सजिलै महानगरवासीको मत परिहाल्छ भन्ने कुनै अधार भने छैन । उनलाई पछिल्लो पुस्ताको युवाहरुको भोट आउने प्रवल संभावना भने देखिन्छ ।
एमाले उम्मेदवार केशव स्थापित र कांग्रेस उम्मेदवार सिर्जना सिंहसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु चानचुने कुरा होइन ।
राष्ट्रिय मिडियाहरुको प्राथमिकतमा परेका बालेनले रामै्र चर्चा पाएका छन । ९० हजार भन्दा बढि मत ल्याएर निर्वाचन जित्ने दावी गर्नु आफैमा सहासको कुरा भने हो ।
यस अघि २०७४ सालको स्थानिय निर्वाचनमा विवेकशिल नेपाली पार्टीका मेयर उम्मेदवार रन्जु दर्शनाले वालेनजस्तै धेरै चर्चा पाएका थिए । उनले त्यसवेला २३ हजार ४३९ मत प्राप्त गरेका थिए ।
अर्का स्वतन्त्र मेयर उम्मेदवार सुमन सायमी र उमपेयर विद्या श्रेष्ठको पनि चर्चा कम छैन । काठमाडौका रैथान आदीवासी मूलवासी उनीहरु नेवाः समुदायका लागि परिचित नाम हो ।
लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकाको नेवाः भूमि अतिक्रमण, गैरन्याकि सडक विस्तारविरुद्ध, भाषा, संस्कृति अतिक्रमण विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउँदै आएका सायमी र श्रेष्ठसँग महा नगरवासीसँग मत माग्ने थुप्रै आधारहरु भने देखिन्छ ।
नेवाः हक, अधिकारको लागि लड्दै आएका साममी थुप्रै पटक जेल पनि परेका छन ।
काठमाडौंको भित्री सहरमा नेवाः सम्पदा प्रेमी, भाषा प्रेमी र युवा पुस्ताहरुको भोट उनहिरुलाई जाने संभावनालाई रोक्न सकिँदैन ।
यस अघि २०७४ का स्थानिय निर्वाचनमा मेयर पदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका किशोर थापा फेरि मेयर लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन ।
थापाले पनि महानगरलाई व्यवसस्थित गरी महानगरवासीलाई वढिभन्दा बढि सुविधा दिने प्रतिवद्धताहरु प्रस्तुत गरेका छन ।
उनले महानगरको फोहर व्यस्थापनलाई दिगो र उपयोगी बनाउने बारे चर्चा गर्दै आएका छन ।
थापाको योजनालाई विश्वास गर्नेहरु पनि कम छैन । यस अघि उनले महानगरवासीको १८ हजार ४९६ मत पाएका थिए ।
यो पटक महानगरवासीले आफूूलाई विश्वास गरेर चुनाव जिताउने दावी गरेका छन । यस अघि राम्रै मत पाएकोले थापाको चर्चा राम्रै देखिएको छ ।
२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार ग्वोर्की प्रसाद श्रेष्ठले १६४, अमोत महर्जनले ४३, दिनेश शाहीले ४२, लक्ष्मी प्रसाद भण्डारीले ३६, नवराज कार्की २१ मत प्राप्त गरेका थिए ।
पार्टीका हजारौ संगठित कार्यकता, प्रतिवद्ध कार्यकर्ता, शुभ चिन्तकहरुले पार्टी बाहेक अरु कसैलाई भोट हाल्ने बाला छैन, त्यसैले पनि भन्न सकिन्छ समाजिक सञ्जालमा चुनाव जिते झै लागेपनि त्यो वास्तविकता भने हुने छैन ।
२०७९ बैशाख २६, सोमबार प्रकाशित0Minutes 419 Views